विष्णु रिमालको सल्लाहकार को ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
विष्णु रिमालको सल्लाहकार को ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको ट्वीट सामाजिक सञ्जालमा ‘हट केक’ बनिरहेको छ । आइतबार(आज) बिहान रिमालले आफ्नो मर्यादा भुल्दै गरेको ट्वीटमा ‘छौंडाहरु आफैं चल्मलाएका हुन् कि कसैले छोडेका?’ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । उनले कवितात्मक शैलीमा गरेको ट्वीट पश्चात सामाजिक सञ्जाल नराम्रोसँग खलबलिएको छ ! उनले ट्वीटमा लेखेका छन्:
भनिन्छ, छौडाहरु आफैं चलमलाउँदैनन्,
यद्दपी रिमालले के कुराको संकेत गर्दै कसलाई व्यंग हानेका हुन्, त्यो भने खुलाइएको छैन । उनको ट्विटमा तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । पाँच घण्टामा नै तीन सयभन्दा बढीले रिप्लाइ गरिसकेका छन् । अधिकांश ट्वीटर प्रयोगकर्ताले उनको आलोचना गरेका छन् । उनको ट्वीटमा प्रतिक्रिया जनाउँदै उषाकिरण तिम्सेना लेख्छिन् – “कमरेड तपाँई पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य र प्रम ज्युको सल्लाहकार दुवै पदबाट राजिनामा दिनुस् । यो चेतनास्तरले दुवै पदलाई न्याय गर्न सक्दैन ।”
अर्का ट्वीट प्रयोगकर्ता विष्णु पाण्डे लेख्छन्– “कठै सल्लाहकारज्युका शब्द चयन! भोली फेरी यही समाजमा सामान्य नागरिकको रुपमा जिवनयापन गर्नु पर्ने दिन आउदैन ? कि त्यती दुरर्दर्शिता पनि छैन ? सोचाइ साह्रै निकृष्ट र भाषा तल्लो स्तरको हुनुपर्ने विशेषता सहित सल्लाहकार पदको आवेदन माग भएको थ्यो कि पद नै यस्तो हो या पारिवारिक गुण ?
यस्तै अर्का विमल योगी व्यंग्य कस्छन – “उट्पट्याङ शब्दकाे खानी यता रै छ । म भने प्रधानमन्त्री ज्यूलाई गाली गर्दै ।”
@BishnuRimal 5h5 hours ago
भनिन्छ, छौंडाहरू आफैं चलमलाउँदैनन् कसैले छोड्छन्, दु:ख दिन्छन् ! यी छौंडाहरू आफैं चलमलाएका हुन् की कसैले छोडेका?